Canada: Ireo Nanjavona Teny Amin’ny Lalàmben’ny Yellowhead · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2017 8:41 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Português, Français, Italiano, македонски, 繁體中文, 简体中文, Shqip, 日本語, English
Tsimshian Mask par get directly down
Nisarika ny saina tamin'ny lahatsary fanadihadiana Kanadiana izay mitantara ny fanjavonan'olona sy ny famonoana ireo vehivavy mihoatra ny dimy tao amin'ny foko Indiana tany Canada tao anatin'ny ny telopolo taona farany ny vondrona vehivavy mpanatontosa sarimihetsika Women Make Movies. Nantsoina hoe Dawn Crey ilay sarimihetsika, araka ilay niharam-boina faha 23, izay fantatra tamin'ny alàlan'ny ADN, nandritra ny fanadihadiana heloka bevava goavana indrindra natao tamin'ny andiana famonoan'olona izay nitranga tany Canada, teo anelanelan'ny taona 2002 sy 2004. Mifantoka momba izany zava-nitranga izany ilay horonantsary ahitana ireo niharam-boina hafa ary manasongadina ny tsy firaharahian'ny manampahefana taorian'ireo fanjavonan'olona sy ireo andiana famonoana olona. Ary ny olana atrehin'ny fianakavian'ireo vehivavy mba hahazoana rariny amin'ny anarany ihany koa.
Azo jerena ao amin'ny rakitra natokana ho an'ny raharaha amin'ny alàlan'ny tranonkala Citizen Shift ny ampahany tamin'ity horonantsary ity sy ireo hafa . Mampiseho ny fanjavonan'i Dawn Crey tao Vancouver ny lahatsary voalohany, avy amin'ilay sarimihetsika Finding Dawn:
Natokana ho an'i Doleen Kay Bosse ny lahatsary fahatelo sady farany izay ampahany avy tamin'ny lahatsary fanadihadiana. Nangataka fanazavana momba ny fanjavonany nandritra ny taona maro ny fianakaviany ary nijoro ho vavolombelona fa tsy nandray velively ny tatitra momba ny fanjavonan'olona tamim-pahamatorana ny polisy kanadiana raha vao vehivavy Indiana no resahana.